Job sara ihe a gwara ya (1-30)
O kwuru na ákwá ọ na-ebe ziri ezi (2-6)
Ndị bịara ịkasi ya obi na-aghọ ya aghụghọ (15-18)
“Eziokwu anaghị afụ ụfụ” (25)
6 Job wee sị: 2 “Ọ dị m ka ya bụrụ na e nwere ike ịtụ nsogbu m+ niile atụ̀,Jirikwa ihe e ji atụ̀ ihe tụọ ha na ahụhụ m na-ata. 3 N’ihi na ọ dị arọ karịa ájá dị n’oké osimiri. Ọ bụ ya mere m ji ekwu okwu n’echeghị echiche.+ 4 N’ihi na akụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile agbatala m,Nsí si n’akụ́ ndị ahụ na-abanyekwa m n’ime ahụ́.+ Ọgụ Chineke na-alụso m emeela ka ụjọ zuo m ahụ́. 5 Jakị ọhịa+ ọ̀ ga na-eti mkpu mgbe o nwere ahịhịa ọ ga-ata,Ka ehi ọ̀ ga na-eti mkpu mgbe o nwere ihe ọ ga-eri? 6 À na-eri nri na-anaghị atọ ụtọ n’etinyeghị ya nnu, Ka mmiri si n’ahịhịa malo ọ̀ na-atọ ụtọ? 7 Ekweghị m* emetụ ụdị ihe ndị ahụ aka. Ha dị ka nri mebiri emebi. 8 Ọ dị m ka ya bụrụ na a ga-emere m ihe m na-arịọ,Na Chineke ga-emere m ihe m chọrọ, 9 Na Chineke ga-ekwe zọpịa m,Nakwa na ọ ga-esetị aka ya bibie m.+ 10 N’ihi na nke ahụ ga-akasidị m obi. M ga-amali elu ṅụrịa ọṅụ n’agbanyeghị na ahụ́ na-egbusi m mgbu ike,N’ihi na eledatụbeghị m ihe Onye Nsọ kwuru anya.+ 11 Ike ịnọ na-echere ọ̀ dị m?+ Gịnị ka m ga-enweta n’ikpeazụ mere m ka ga-eji dịrị ndụ? 12 M̀ siri ike ka nkume? Ka ọ̀ bụ ọla kọpa ka e ji mee ahụ́ m? 13 È nwere otú m nwere ike isi nyere onwe m aka Mgbe a napụrụla m ihe niile na-enyere m aka? 14 Onye ọ bụla na-anaghị ahụ mmadụ ibe ya n’anya*+ Anaghịzi atụ egwu Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.+ 15 Ụmụnne m na-aghọ m aghụghọ+ ka ngele,*Ka ngele ndị na-ata ata. 16 Mmiri kpụkọrọ akpụkọ na-eme ka ha na-eji oji,Snoo na-agbaze agbaze na-ezo n’ime ha. 17 Ma mgbe oge ruru, mmiri anaghịzi adị na ha. Mgbe okpomọkụ bịara, ha na-ata. 18 Ha na-asọrọ gaa ebe ọzọ. Ha na-asọba n’ọzara wee taa. 19 Ndị si Tima aga njem+ na-achọ mmiri ndị ahụ. Ndị si Siba aga njem+ na-ele anya ha. 20 Ihere na-eme ha n’ihi na ha cheburu na ha ga-ahụ mmiri. Ha bịarutere ebe ahụ ma ha ahụghị ihe ha tụrụ anya ya. 21 Ọ bụ otú a ka unu dị n’ebe m nọ.+ Unu ahụla ahụhụ dị egwu m na-ata, ụjọ abịa unu.+ 22 M̀ sịrị unu nye m ihe, Ka m̀ rịọrọ unu ka unu si n’akụnụba unu nye m onyinye? 23 M̀ rịọrọ unu ka unu napụta m n’aka onye iroMa ọ bụ ka unu zọpụta m n’aka ndị na-emesi mmadụ ike? 24 Kụzierenụ m ihe m ga-eme. M ga-agba nkịtị gee ntị.+ Meenụ ka m ghọta ihe m mejọrọ. 25 Eziokwu anaghị afụ ụfụ.+ Ma olee uru mba unu na-abara m bara?+ 26 Ùnu na-achọ otú unu ga-esi tụchasịa ihe m kwuru,Bụ́ okwu onye ike ụwa gwụrụ,+ nke ifufe na-efesasị? 27 Unu ga-efekwa nza n’isi nwa na-enweghị nne na nna,+Reekwa enyi unu.*+ 28 Ngwa, tụgharịanụ lee m anya,N’ihi na agaghị m aghara unu ụgha. 29 Biko, cheenụ echiche, unu aghọtahiela m. Cheenụ echiche ọzọ, n’ihi na m ka bụ onye ezi omume. 30 Ire m ọ̀ na-ekwu ihe na-adịghị mma? Ọ̀ bụ na enweghị m ike ịmata na ihe adịghị mma?
^ Ma ọ bụ “Mkpụrụ obi m ekweghị.”
^ Ma ọ bụ “egosi mmadụ ibe ya ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “obere iyi.”
^ Ma ọ bụ “Jirikwa enyi unu gbanweta ihe.”